‘इक्यानको शैक्षिक मेला विद्यार्थीको भविष्य बनाउने गोरेटो हो’ | Makalukhabar.com
गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा वर्षेनी हजारौं विद्यार्थी विदेशिइरहँदा शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीलाई नेपाली विद्यार्थी पलायन गराएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तथापि, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डे भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनी नेपाली विद्यार्थीले विश्व बजारमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्दा आफ्नो र मुलुकको विकासमा समेत टेवा पुगेको तर्क गर्छन् ।
हरेक वर्ष इक्यानले आयोजना गर्ने बृहद् शैक्षिक मेलाको १३ औं संस्करण यहि असार २६ गतेदेखि हुँदैछ । भृकुटीमण्डपमा हुने चारदिने शैक्षिक मेलाले दिने सन्देश, नेपाली विद्यार्थी विदेशिनुको कारण, त्यसले दिने अवसर र त्यसले निम्त्याएको समस्या तथा शैक्षिक परामर्श ब्यवसायका विविध विषयमा अध्यक्ष पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी:
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डे
१३ औं इक्यान शैक्षिक मेलाको तयारी के भइरहेको छ ?
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानले वर्षेनी आयोजना गर्ने शैक्षिक मेलाको १३ औं संस्करण विगतको भन्दा भब्य, सभ्य तथा प्रभावकारी बनाउन जोडतोडका साथ कामहरु भइरहेको छ । असार २६ गतेदेखि हुन गइरहेको शैक्षिक मेला विगतमा भइरहेका शैक्षिक मेलाभन्दा फरक, विशिष्ट तथा प्रभावकारी शैक्षिक मेला हुन्छ ।
यसपटक विगतका परम्परागत प्रणालीलाई चिर्दै नयाँ ढंगले शैक्षिक मेला ब्यवस्थापन हुनेछ । शैक्षिक मेला ब्यवस्थापनको जिम्मा वल्र्ड विजनेश मेनेजमेन्ट एण्ड कन्सल्टेन्टले लिएको छ । यसपटक शैक्षिक मेलालाई फाइभ स्टार लेवलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।
इक्यानको शैक्षिक मेलाले विद्यार्थी अभिभावकलाई कसरी फाइदा पुग्ला ?
हरेक वर्ष इक्यानले आयोजना गर्ने शैक्षिक मेलाको छुट्टै विशेषता र महत्व छ । यो मेला उच्च शिक्षाकालागि विदेश जाने सोच बनाइरहेका विद्यार्थीका लागि मात्र हैन, ती सबै विद्यार्थीका लागि महत्वपूर्ण छ जो कक्षा १२ पास गरीसकेपछि ‘अब कसरी अगाडी बढ्ने, कस्तो शिक्षा कहाँ कसरी पढ्ने ?’ भनेर अलमलमा परेका छन् । यो शैक्षिक मेला ती विद्यार्थीका लागि हो, जो गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चिन्तित छन् ।
यो मेला ती अभिभावकका लागि हो जो आफ्ना बालबच्चाले विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने शिक्षा हासिल गरुन र भविष्यमा आफुभन्दा अब्बल बनुन भन्ने सोच राख्छन् । तसर्थ इक्यानले सञ्चालन गर्ने मेला औपचारिकताका लागि मात्रै हुँदैन । यसले विद्यार्थी अभिभावकलाई भोलीको सुन्दर र सुरक्षित भविष्य निर्धारणको गोरेटो तय गर्ने माध्यम हो ।
शैक्षिक मेलाहरुले विद्यार्थीको भविष्य कसरी तय गर्छ ?
इक्यानले आयोजना गर्ने मेलाको उद्देश्य एकै छानामुनी विश्वका उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएका देशका युनिभर्सिटी र कलेजलाई भेला गरेर विश्वको शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, शिक्षणविधि त्यहाँका आधिकारिक प्रतिनिधि र मान्यता प्राप्त काउन्सलरबाट विद्यार्थी अभिभावकलाई जानकारी दिनु हो । यसका अलावा विद्यार्थीको शैक्षिक, आर्थिक, मानसिक अवस्था हेरेर उनीहरुलाई सहि परामर्श दिनु हो ।
कक्षा १२ पास गरेको विद्यार्थीलाई कुन विषय कहाँ कसरी पढ्ने ज्ञान हुँदैन । उनीहरुको भोलीको करियर सुरक्षित र राम्रो बनाउन सहि काउन्सलरको आवश्यक हुन्छ । इक्यानले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक मेलामा विद्यार्थी आउँदा उनीहरुले दक्ष अनुभवी र मान्यता प्राप्त काउन्सलरबाट करियर काउन्सेलिङ समेत पाउने भएकोले उनीहरुको भविष्य निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।
शैक्षिक मेलामा एक सय भन्दा बढि कन्सल्टेन्सी तिनका शैक्षिक परामर्श दाता तथा विदेशी कलेजहरुको उपस्थिति रहने भएकोले विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दातृले दिएको सुचना कत्तिको सत्य तथ्य छ भन्ने क्रस गर्ने उपयुक्त माध्यम पनि हो ।
शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीले विद्यार्थीलाई विदेश जान प्रेरित मात्र गर्छन् भन्ने गरिन्छ, कतिको सत्यता छ ?
इक्यानमा आबद्ध शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीले विद्यार्थीलाई ‘विदेश जाउ विदेश जाउ’ भनेर कहिल्लै भनेको छैन र भन्दैन पनि । हाम्रो उद्देश्य भनेको विद्यार्थीलाई विश्वको शिक्षासँग परिचित गराउने र उनीहरुको शैक्षिक, आर्थिक योग्यता अनुसार विश्व बजारमा गएर प्रतिष्पर्धा गर्दै उत्कृष्ठ शिक्षा हासिल गर्न सहजीकरण गर्नु हो ।
हामी विद्यार्थीलाई विश्वका उत्कृष्ट देशका उत्कृष्ट कलेजमा पुर्याउनका लागि सहजकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्दछौं । कुन देशको शिक्षा कस्तो छ, कलेज तथा विश्वविद्यालय कस्ता छन् ? कस्तो विषय अध्ययन गर्दा स्वदेश र विदेश दुवै तर्फ करियर बनाउन सकिन्छ ? भन्ने काउन्सेलिङ गर्दै विद्यार्थी र कलेज विच पुलको काम गर्नु शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीको उद्देश्य हो ।
तर, तपाईले भने जस्तै परामर्श ब्यवसायीले कलेज र विद्यार्थीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न पुलको मात्रै काम गरेको भए विदेशी भूमिमा विद्यार्थी कसरी अलपत्र परे ?
केहि महिनाअघि अस्ट्रेलियामा घटेको घटनालाई इङिगत गर्दै हुनुहुन्छ । जुन भवितब्य थियो । त्यो घटना हामी परामर्श ब्यवसायीको गल्तीका कारण नभइ अस्ट्रेलियाको शिक्षा प्रणालीमा आएको परिवर्तनले निम्तिएको थियो, जुन समाधान भइसकेको छ । अब पुनः त्यहि कुरालाई अतिरञ्जित गर्नुको अर्थ छैन । अब कुरा गरौं सबै कन्सल्टेन्सीले कलेज र विद्यार्थीविच सम्बन्ध स्थापित गर्न पुलको मात्र काम गर्दैछन् त ? भन्ने कुरा । जसरी एउटै हातका पाँच औंला बराबर हुँदैनन् सबै ब्यवसायीले पनि बराबर इमान्दार भएर काम गरेको भन्न सक्दिन । तथापि, इक्यानमा आबद्ध परामर्श ब्यवसायीहरु राज्यको नियम कानुन र परिधीमा रहेर ब्यवसाय गरीरहेका छन् । इक्यानका सदस्य संस्था भन्दा बाहिर रहेका संस्थाहरुमा समस्या देखिएको छ ।
एउटा ठूलो संगठन भएको नाताले यो क्षेत्रलाई ब्यवसायीक र मर्यादीत बनाउन इक्यानले किन भूमिका खेल्दैन ?
शैक्षिक परामर्श ब्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदै विद्यार्थी अभिभावकको जिवन तथा लगानी सुरक्षित गर्न इक्यानले नेपाल सरकारका नियामक निकायसँग बारम्बार भन्दै आएको छ कि, सञ्चालनमा आएका सबै शैक्षिक परामर्श संस्थालाई राज्यको नियम कानुनभित्र ल्याउनु पर्यो । शैक्षिक परामर्श भन्दै मेनपावरको काम गर्ने, विद्यार्थी भिसामा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्युजलेण्ड, क्यानडा, युरोप, जापान पठाइदिने भन्दै लाखौं ठग्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो भनेर पहिले राज्यलाई सचेत गराउने इक्यान हो । जतिबेला राज्यसँग परामर्श ब्यवसायलाई नियमन गर्ने कानुन थिएन इक्यानले आफ्ना सदस्यलाई आफ्नै ‘कोड अफ कन्डक्ट’ बनाएर लागू गर्ने काम गरेको छ । राज्यलाई यो क्षेत्रमा नियमन गर्न घच्घच्याएको छ ।
तरपनि किन यो क्षेत्र झनझन बदनाम भइरहेछ ?
यसमा राज्यकै कमजोरी मान्दछु म । राज्यले यो क्षेत्रका बारेमा पर्याप्त अध्ययन नगरीकनै नियम कानुन बनाउने काम गर्यो । समय अनुसार कानुन बनाउँदै यो क्षेत्रलाई स्वच्छ र मर्यादित रुपमा चलाउन नियमित अनुगमन गरेको भए विक्रिति आउने थिएन । तथापि, यहाँले भनेजस्तो पुरै विग्रिसकेको छैन । अझैपनि सुधार्न सकिन्छ । हामीले राज्यलाई धेरै अगाडी यो क्षेत्रलाई सुधार्न यी–यी कुरा गर्नुपर्छ भनेर लिखित रुपमा सुझाब दिएका थियौं । तर, त्यो सुझाबलाई टोकरीमा मिल्काउने काम भयो । र, राज्य हामीप्रति कठोर बन्दै गयो ।
शैक्षिक परामर्श ब्यवसायलाई सम्बाेधन गर्न बनेको विधेयक चाहिने भन्दा कठोर आयो । ब्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने जस्तो ठानियो । अनुगमनका नाममा शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीलाई धरपकड गर्ने, कार्यालयमा ताला लगाइदिने, कागजात नियन्त्रणमा लिई अपराधीलाई जस्तो गर्ने ब्यवहार भयो । विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी भित्र्याउने काम भयो ।
राज्य कडा रुपमा आउनुमा यहाँहरुको कुनै भूमिका छैन ? तपाईहरु निर्दोष हुनुहुन्छ ?
मैँले शतप्रतिशत कन्सल्टेन्सी निर्दोष छन्, उनीहरुको भूमिका छैन कदापि भनेको हैन । तर, राज्यले जसरी ब्यवसायीलाई त्रासमा राख्ने काम गर्यो त्यो गलत भयो मात्र भनेको हो । यो क्षेत्र एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो । वर्षेनी उच्च शिक्षाका लागि हजारौं विद्यार्थी करोडौं खर्च गरेर विदेश अध्ययनका लागि जान्छन् । भोली विदेश गएर अन्तराष्ट्रिय डिग्री हासिल गरेर स्वदेश आएपछि तिनले देश निर्माणमा गर्ने योगदान महत्वपूर्ण छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र अझैपनि विदेशीएका नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले चलायमान छ भन्ने कुरा विर्सनु हुन्न । हामी प्रत्यक्ष रुपमा अन्तराष्ट्रिय शिक्षा र विद्यार्थीको भविष्यसँग सरोकार राख्छौं । तसर्थ यो क्षेत्र नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएकोले यसलाई राज्यले महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा लिएर यहाँ भएका विक्रिति विसंगति हटाउन हामीजस्ता संगठनसँग सल्लाह सुझाब लिएर काम गरोस र हामीलाई निर्वाध रुपमा ब्यवसाय गर्ने वातावरण बनोस भन्ने चाहन्छौं ।
यो क्षेत्रमा एफडिआईको प्रवेशले केके असर पुर्याउन सक्छ ?
पहिलो कुरा नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र ठूलो उद्योग हैन । यो सेवामुलक शैक्षिक क्षेत्र हो । र, यो नेपालीकै लगानीमा चल्न सक्छ । हामी विद्यार्थी र कलेजविच पुलको कामगर्दै, विद्यार्थीलाई करियर काउन्सेलिङ गर्दै उनीहरुले तिरेको शुल्कबाट चल्न सक्छौं । यो क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा राज्यकोभन्दा यहाँ २५ औं वर्षदेखि अनवरत रुपमा जिवन अर्पण गर्ने अग्रजहरुको ठूलो योगदान छ ।
विदेशी विश्वविद्यालय, कलेज र नियामक निकायसँग सम्बन्ध फराकीलो गराउने भनेकै शैक्षिक परामर्श ब्यवसायी हुन् । आज तिनले अढाई दशक बढि गरेको योगदानलाई अवमुल्यन गरी विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा स्वदेशी पूँजी डुबाउने खेल भइरहेको छ । भने, नेपालको शिक्षामा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा विद्यार्थीको डाटा समेत विदेशीलाई दिने खेल हुँदैछ ।
हामीले काम गरिरहँदा राज्यलाई वर्षेनी करोडौं कर तिरीरहेका थियौं अब विदेशी लगानी प्रवेश गराउँदा त्यो कर र पूँजी समेत बाहिरीने खतरा बढेको छ । समग्रमा भन्दा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आएको एफडिआइले भोली नीजि क्षेत्रको लगानी त डुब्दैछ नै, विद्यार्थीको सुरक्षामा समेत प्रश्न चिन्ह उठ्ने शंका छ । हामी अझैपनि आशावादी छौं संसदमा विचाराधिन यो विषय मुलुक भित्रको लगानीका पक्षमा उभिनेछ ।
एआइविटी केसपछि मन्त्रालयले डिप्लोमा अध्ययन गर्न जानका लागि विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिन रोक लगायो नी ?
विदेशी विद्यार्थीका लागि हरेक देशले आ–आफ्नै नियम बनाएका हुन्छन् । नेपालबाट अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता देशहरु जाने विद्यार्थीहरु अधिकतम डिप्लोमा तथा भाषा सिक्नका लागि जाने गर्दछन् । नो अब्जेक्सन लेटर बन्द गर्दा सरकारले आफैंले बनाएको नियमलाई गलत ब्याख्या गरी डिप्लोमा तथा एड्भान्स डिप्लोमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई अवरोध सृजना गर्यो । यसले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन भयो भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालियो । जहाँ सर्वोच्चले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश भएको अवस्था छ । नेपालको कुनैपनि कानुनले स्वदेशमा होस वा विदेशमा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगरेको अवस्थामा मन्त्रालयका केहि कर्मचारीले कानुनमा भएको एकाध कमजोरीको फाइदा लिँदै संविधान विपरित सुचना निकाल्ने काम भएको थियो । यो विषय छिट्टै किनारा लाग्छ भन्नेमा आशावादी छु ।
अन्तमा, १३ औं इक्यान शैक्षिक मेलाका सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?
इक्यानले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आइरहेको शैक्षिक मेलामा विद्यार्थीले एकै छानामुनी सयौं कन्सल्टेन्सी, शैक्षिक परामर्शदाता, विदेशी विश्वविद्यालय, कलेज र तिनका मान्यता प्राप्त प्रतिनिधिबाट करियर काउन्सेलिङ पाउने अवसर छ । यो शैक्षिक मेलाबाट विद्यार्थी अभिभावकले विश्व बजारमा कस्तो शिक्षा रहेछ भन्ने समेत बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
शैक्षिक मेलामा मुलुकै प्रतिष्ठित नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कन्सल्टेन्सीको मात्र सहभागीता रहने भएकोले यो विस्वसनीय छ । यहाँबाट प्राप्त हुने सुचनाहरु तथ्यगत छन् भन्दै सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभाबक र सरोकारवालाहरुलाई सक्रिय उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
युवा युवती झुण्डिएको अवस्थामा फेला
परिषद्ले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई उत्कृष्ट कलेज भन्दै दियो स्थायी मान्यता
भाद्र २६, काठमाडौं । भक्तपुर चाँगुनारायण स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज उत्कृष्ट इन्जिनियरिङ कलेजका रुपमा परिभाषित भएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले गरेको पछिल्लो अनुगमन तथा मुल्यांकनमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज उत्कृष्ट संस्थाका रुपमा उभिएको हो । सञ्चालकहरुको आपसी विवादमा लम्बोदर न्यौपाने पक्षधरले कले... जारी राख्नुहोस...
भाद्र २५, काठमाडौं । विदेशी विद्यार्थीले बेलायती विश्वविद्यालयबाट ‘ग्रयाजुएट’ भएपछि दुई वर्षसम्म ‘वर्किङ भिसा’ पाउने भएका छन् । बेलायती सरकारले इन्टेक २०२०–२१ देखि यस्तो नियम ल्याउन लागेको हो । उक्त कुरा बेलायत होम अफिसको अध्यागमन सम्बन्धि पछिल्लो श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।तत्कालिन गृहमन्त्री टे... जारी राख्नुहोस...
बेवारिसे शव उठाउने विनयलाई बक्स हिल इन्स्टिच्युटले दियाे १५ सय डलर
चैत्र २५, काठमाडौं । विनय जंग बस्नेतले कुनै समय अत्यन्त खराब जीवन बाँचे । उनी आफैंलाई आफ्नो जीवन देखेर विरक्त लाग्थ्यो । ६ वर्षअघि उनले महसुस गरे, उनी जे गरिरहेका छन्, त्यो ठीक भइरहेको छैन । त्यसपछि उनी जीवन बदल्ने सोचमा लागे । दुर्ब्यसनबाट बाहिर निस्किए । अनि समाजसेवामा लागे । अहिले उनी आर्यघाटमा व... जारी राख्नुहोस...
विश्व साक्षरता दिवसको अवसरमा साक्षरता कार्यक्रम संचालन
भाद्र, २३ विराटनगर। विश्व साक्षरता दिवसको अवसरमा बिराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल र रोटरी आरोग्य मिसन रोटरी क्लब अफ बिराटनगर डाउन टाउनको संयुक्त आयोजनामा विद्यार्थीलाई सरसफाई र स्वास्थ्यको विषयमा साक्षरता कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ ।श्री जनता बाल आधारभुत विद्यालयमा अध्ययनरत ३५० विद्यार्थीलाई स... जारी राख्नुहोस...
दोस्रो इक्यान पूर्वाञ्चल शैक्षिक मेला भाद्र ३० देखि हुने
भाद्र २३, विराटनगर । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) पूर्वाञ्चल शाखाले पूर्वका दुई ठूला शहरमा शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्ने भएको छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने सोच बनाइरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै आयोजना गर्ने शैक्षिक मेलामा एकै छानामुनी दर्जनौं शैक्षिक परामर्श संस्था तथा विदेशी विश्वविद्याल... जारी राख्नुहोस...
‘नेपाली सामान जसले चिन्छ, उसले नेपाली सामान नै खोज्छ’
यही भाद्रको अन्तिम साता काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो फर्नेक्स २०१९ आयोजना हुँदैछ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी संघको आयोजनामा हुन लागेको उक्त मेला भदौ २५ देखि २९ गतेसम्म चल्नेछ । यसको तयारी पनि पुरा भइसकेको जानकारी दिइएको छ । स्वदेशी फर्निसिङ उद्योगको समस्या, बजारीकर... जारी राख्नुहोस...
भाद्र १८, विराटनगर १८ । विराटनगर स्थित हिमालय दर्शन कलेजले ललितपुरमा रहेको एम पर्सेप्ट टेक्नोलोजी नामक कम्पनीसँग साझेदारी गरेको छ । आईटी कलेजलाई पुर्णता र गुणस्तर वृद्दिका लागी कलेजले उक्त कम्पनीसँग साझेदारी गरेको हो । हिमालय कलेजले विराटनगरमा बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कम्पनीसँग साझेदारी गरेक... जारी राख्नुहोस...
भदौ १८, काठमाडौं । बढ्दो शहरीकरण, अव्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन, अव्यवस्थित सडक निर्माण, विभिन्न कलकारखाना तथा पुराना सवारी साधनहरुबाट निस्कने रसायनिक धुवाँ धुलाको सही व्यवस्थापन नहुँदा शहरी भेगका अधिकांश मानिसहरुको जनजीवन अस्तव्यस्त छ । धुवाँ धुलोका कारण विभिन्न रोगको शिकार भएका छन् मानिसहरु । अव्यवस... जारी राख्नुहोस...
हरितालिका तीज अर्थात् हिन्दू नारीहरुको महान पर्व, जसले नारीहरुलाई एकजुट बनाउँछ । त्यही भिडमा सुख, दुःख, खुशी साटिन्छ । पीडा पोखिन्छ । यो चाड भाद्र शुक्ल तृतियादेखि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ । विवाह भइ माइतीघर छोडेर गएका चेलिबेटीहरुलाई बोलाएर दर खुवाउने गरिन्छ । तीजमा विशेषगरी भगवान शिवको पूजा आराधना गरी व्... जारी राख्नुहोस...
‘विदेशको ज्ञान र सीपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्नसके सुनमा सुगन्ध हुन्छ’
भाद्र १५, काठमाडाैँ । पछिल्लो समय उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । कतिपय विद्यार्थी विदेशमा पढेर नेपाल फर्किएर केही गर्छु भन्ने उद्देश्यले जान्छन् भने कतिपय उतै सेटल हुने उद्देश्यले गएको पाइन्छ ।विद्यार्थीहरु स्वदेश फर्कन किन चाहँदैनन् ? के नेपालको शैक्षिक स्तर खस... जारी राख्नुहोस...